तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । विशेष अध्ययन तथा नयाँ ज्ञानको खोजीमा समय बित्नेछ । गुरुजनको सहयोगले बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान हासिल गर्न सफल भइनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ । साँझतिर शत्रुले दुःख दिन सक्छन्। मिहिनेतले राम्रो प्रतिफल दिलाउनेछ ।
जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ । केही समय अरूका लागि उपयोग भइएला। परिवारजनको सहयोगले काम बनाउन भने सकिनेछ । टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन् । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । साँझतिर विशेष फाइदा हुनेछ । अध्ययनको गतिले थप उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।
सहयोगीहरू पछि हट्नाले चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ । प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले केही काम दोहोर्याउनुपर्ला । अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मयोग अघि बढ्नेछ । लगनशीलताले परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ । साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ । लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ । साँझतिर भने काम बिग्रने भयले सताउन सक्छ ।
तार्किक क्षमता बढ्नेछ भने मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ । बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्छ । कामले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूको माध्यमबाट राम्रै फाइदा हुनेछ । साँझतिर आयस्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम सुरुवात हुनेछ।
पहिलेको सफलताले महत्त्वाकांक्षा बढाउनेछ । विभिन्न अवसर पनि आउनेछन्। तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ । आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् र नयाँ काम पाइनेछ। पारिवारिक जमघटले आनन्द दिलाउनेछ । साँझतिर लेखन तथा सिर्जनात्मक काममा रुचि बढ्नेछ ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ । साँझतिर यात्राको प्रसंगमा खर्च हुन सक्छ । धनमाल सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला ।
केही विवादास्पद काम गर्नुपरे पनि प्रयत्न गर्दा राम्रो उपलब्धि पाइनेछ । रोकिएको काम बन्नाले जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ । विशेष भेटघाटले उत्साह बढाउनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा उठाउने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक दायित्व हातलागी हुनेछ । साँझतिर आयस्रोत सबल हुनेछ । पहिलेको उपलब्धिले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ ।
आकस्मिक समस्याले शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । परिस्थितिवश अरूका लागि अलमलिनुपर्ला । सम्भावना देखिए पनि ठूलो उपलब्धि नहुन सक्छ । मिहिनेत गर्दा पछिका लागि कामको जग बसाउन भने सकिनेछ । साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ । समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । व्यवसायमा आंशिक लाभ हुनेछ । नयाँ काम थाल्न पनि सकिनेछ ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे लाभ हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। सोखले फजुल खर्च भने बढाउन सक्छ । साँझतिर यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । पुरुषार्थी काम सिद्ध गर्ने समय छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि कसिन सक्छ । व्यापारमा फाइदा हुनेछ ।
२०७७ फागुन १६ गते, आइतवार, २८ फेब्रअरी २०२१
तपाईको आज (शुक्रबार) को राशिफल भन्छ–आज यी राशिकाले पुर्याउनु पर्नेछ विशेष ध्यान !
आज बिहीवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
तपाईको आज (बुधबार) को राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान
तपाईको आज (मंगलबार) को राशिफल, हेर्नुहोस् आज कुन–कुन राशिकालाई छ त विशेष लाभ ?
यस्तो छ काठमाडौंलाई सुन्दर र हराभरा बनाउने महाविर पुनको योजना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
काठमाडौंमा उपत्यकामा बाक्लिएको वस्ति, अस्तव्यस्त जीवनशैली तथा वतावारणमा परेको असरले…